Sacuudiga oo xaqiijiyay geerida Khashoggi iyo saraakiil xilka laga qaadey
Boqortooyadda Sacuudiga ayaa xalay oo Jimco ahayd xaqiijisay in Wariye Jamal Khashoggi oo la weysanaa tan iyo 2-dii bishan October lagu dhex dilay gudaha Qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Istanbul, ee dalka Turkiga.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Boqortooyadda Sacuudiga ayaa sheegay in baaritaan la sameeyay ay ku ogaadeen in muwaadinka u dhashay dalkaasi, ee Jamal bin Ahmad Khashoggi uu ku dhintay dagaal isaga iyo shaqsiyaad kala ku dhexmaray Qunsuliyadda.
Sacuudiga ma uusan bixin macluumaad dheeri ah, oo ku saabsan sababta muranka iyo gacan ka hadalka lagu dilay Khashoggi ka dambeysay iyo halka uu ku dambeeyo meydkiisa, oo illaa hadda la ogeyn halka la geeyay.
Wakaaladda Wararka Sacuudiga [SPA], ayaa sheegtay in kiiska Khashoggi uu soo jeetay dareenka Boqortooyadda, iyadoo la xiray 18 qof oo u dhashay dalkaasi, oo ku lug yeeshay dilka wariyaha, waxaana sido kalena xilalka laga qaadey Saraakiil sare.
Digreeto kasoo baxday Boqor Salman ayaa xilkii looga qadey Axmed Al-Assiri, oo ahaa taliye ku xigeenka Sirdoonka dalkaasi, iyo la taliyaha gaarka ee dhaxal sugaha, Maxamed Bin Salman, oo lagu magacaabo Saud Al-Qahtani.
Boqor Salman wuxuu sheegay inuusan waxba kala socon arinta Wariyaha maqan, isagoo markii hore amray in baaritaan lagu sameeyo, waxaana hadda faray in is-bebel lagu sameeyo hogaanka Sirdoonka Sacuudiga.
Wariye Jamal Khashoggi, oo maqaallo ku qori jiray Wargeyska Washingon Post, ayaa 2-dii bishan u ugaley Qunsuliyadda Istanbul, si uu uga soo qaato warqado caddeynaya inuu furey xaaskiisii hore, isagoo doonayay inuu guursado gabar u dhalay Turkiga.
Kiiskiisa Wariyaha ayaa usoo jeeday Sacuudiga cambaareyn xooggan, iyadoo ay ka hadleen madax badan oo ay kamid yihiin kuwa Mareykanka, Faransiiska iyo Turkiga, oo dalbaday baaritaan dhab ah.
Cod iyo muuqaal muujinaya dilka Khashoggi oo la helay
Caalamka 12.10.2018. 17:59
Sacduuiga ayaa fadeexad kala kulmay dilka Wariyahan oo ku caan baxay inuu...
Trump oo bedelay Mowqifkiisa Sacuudiga ee Kiiska Khashoggi
Caalamka 21.11.2018. 12:23
Xubno kamid ah Kooxdii dishay Khashoggi oo Maxkamad lasoo taagey
Caalamka 03.01.2019. 17:52
Mid kamid ah Amiiradda ugu caansan Sacuudiga oo geeriyoodey
Caalamka 23.12.2018. 14:57
Turkiga oo qaadey talaabo uu cadaalad ugu raadinayo Khashoggi
Caalamka 25.03.2020. 19:55
Khayre oo la kulmay ninka ugu awoodda badan Sacuudiga
War Saxaafaded 11.10.2018. 10:23
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ka xumaaday go'aanka Qatar
Caalamka 03.06.2019. 15:25
Farmaajo oo booqasho aan horey loo shaacin ku tagey Turkiga, lana kulmay Erdogan
Soomaliya 23.11.2018. 23:36
Roobab dabaylo watay oo dad ku laayey caasimadda Somaliland 30.05.2020. 09:05